‘झक्कड थापा’ र ‘कुल्फीवाला’ले दिएको सन्देश - Sagarmatha Online News Portal
काठमाडौं । हरेक मानिसको स्वभाव, बानीव्यहोरा, रुची फरक–फरक हुन्छ । प्रत्येक मानिसको हेर्ने दृष्टिकोण, बुझाई र कार्यक्षमता पनि फरक–फरकनै हुन्छ । तर प्राःय मानिसको एउटै कुरा मिल्छ, त्यो हो कुरा काट्ने । खिल्ली उडाउने । उसको निर्दोषी भावना र संवेदनाप्रति मजाक उडाउने । अनि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न नाम र उपनाप दिँदै मजा लिने । सायद धेरै मानिसहरुको मिल्दोजुल्दो स्वभाव पनि यहि हो । झनै नेपाली समाजमा त अरुको कुरा नकाटी बस्नै नसक्नेहरुको लर्को पनि लामै छ । समुदायको नाममा, जातजाति, भाषा, भेषभूषा, सँस्कृति, सँस्कार, रितिरिवाज, धर्म, विभिन्न समाजिक संस्था, राजनीति लगायत धेरै क्षेत्रमा मपाइत्व झल्कने व्यवहारहरु प्रशस्तै देख्न सकिन्छ । अधिकांश क्षेत्रमा त कुरा काटेर मात्र पुग्दैन । हात हालाहालको स्थिति सिर्जना भएको पनि प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । त्यत्तिले मात्र नपुगेर कयौं मुद्धामामिलामा होमिएर समय बर्बाद गरिरहेका छन् ।
त्यसैको सिकार भए दैलेखका झक्कड थापा । उनको निर्दोषी व्यवहार र प्रस्तुतीकरण । उनले गाएको गीतलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा मजाक उडाउनेको लर्को लाग्यो । विभिन्न नाम र उपनामले सामाजिक सञ्जालमा थापा भाइरल भए । कैयौंले उनको नाम र प्रस्तुतीकरण केवल मजाक र हाँसोमा मात्र उडाए । उनको निर्दोषीपन, सरल स्वभाव र इमान्दारीतामाथि थामिनसक्नु प्रहार भयो ।
नेपाल आइडल सिजन वानको अडिसन राउण्डमा जब झक्कड थापाको प्रवेश भयो, निर्णायकहरु मरीमरी हाँस्दै उनको खिल्ली उडाए । उनको नाम सुन्ने बित्तिकै निर्णायकले झन मजाक उडाए । झनै उनको गायकीले त आगोमा घिउ थप्ने काम भयो । ती निर्दोष गायकीको प्रशंसा गर्नु त कता हो कता ? उल्टै मजाकको शिकार भए उनी ।
नेपाली संगीत क्षेत्रका हस्ती भनिएकाहरु न्युह बज्राचार्य, कालीप्रसाद बास्कोटा र इन्दिरा जोशी निर्णायको कुर्सीमा बसेर उनको मज्जाले खिल्ली उडाए । उनीहरु निर्णायक नभै कतै गाइजात्रा हेर्न गएको दर्शक जस्तैगरी मरीमरी हाँसे । उनीहरु हाँस्नै नहुने भन्ने मेरो भनाई होइन ? तर निर्णायकको जिम्मेवार कुर्सीमा बसेर यसरी गाइजात्रा हेर्न गए जसरी हाँस्न उनीहरुलाई पदीय जिम्मेवारीले दिदैन । हिजो मजाक उडाउनेहरु आज खुलेरै झक्कड थापाको प्रशंसा गर्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका थापालाई नचिन्ने नेपालीहरु सायदै होलान् । सामाजिक सञ्जालमा उनको प्रस्तुती र उनको बारेमा सबैभन्दा बढी गुगल सर्चमा खोजी भएको छ । उनले जे बोले पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । अहिले उनी युट्युबको ट्रेन्डिङमा परेका छन् । झनै उनलाई बनेपाका अरुण लामाले काठमाडौंमा सबै व्यवस्था मिलाइदिएपछि त उनको उचाई चुलिदो छ । त्यत्तिमात्र होइन उनलाई नेपाल आइडलकै सुरज थापाले पनि साथ दिने भएका छन् । सुरजले झक्कडको एक रेकर्डिङ स्टुडियोमा स्वर परिक्षण समेत गराएका छन् । सुदूर भनिएको गाउँबाट सुविधासम्पन्न शहर काठमाडौंको प्रवेशसँगै उनको व्यस्तता बढेको छ । विभिन्न मिडियाहरु उनलाई पछ्याइ रहेका छन् ।
‘कुल्फीवाला’ मनकुमारको क्रेज
‘आयो कुल्फी आयो’ भन्दै बौद्ध, नयाँबस्ती र जोरपाटी क्षेत्रका चोक, गल्ली र सडकमा गाउँदै र नाँच्दै कुल्फी बेच्ने मनकुमार राई पनि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए । झक्कड थापा र राई फरक–फरक क्षेत्रबाट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए पनि उनीहरुबाट एउटै शिक्षाको सन्देश प्रवाह भएको छ । त्यो हो ‘जे हुन्छ, राम्रैका लागि हुन्छ ।’
झक्कड थापाको गायकी र ‘कुल्फीवाला’को खुल्ला सडकमा नाँच देखेर धेरैले खिल्लि उडाएका थिए । कसैले त ‘कुल्फीवाला’लाई बौलाहसम्म भन्न छोडेनन् । उनको कामप्रतिको लगाव, बटुवा, र गल्लीगल्लीमा भेटिने मानिसहरुलाई गरेको इमान्दार व्यवहारले ‘कुल्फीवाला’ दिनप्रतिदिन चर्चित हुँदै गए । झनै उनको ‘कुल्फीडान्स’ र ‘कुल्फी नखाए पनि कुनै गुनासो छैन, मुसुक्क हाँस्न चाँहि नबिर्सिनु होस्’ भन्ने सिलसिलेवार भनाइले सबैको मन जीतेको छ । उनको कामप्रतिको लगाव, इमान्दारता र सिर्जनशीलताको प्रशंसा गर्दै विल्सनबिक्रम राई ‘तक्मेबुढा’ले ‘आयो कुल्फी आयो’ गीत रेकर्ड गरेर म्युजिक भिडियो बनाए । म्युजिक भिडियोमा पनि उनै ‘कुल्फीवाला’लाई नै छमछमी ‘कुल्फीडान्स’मा नचाएका छन् । अहिलेसम्म उनले दुईवटा म्युजिक भिडियोमा ‘कुल्फीडान्स’ नाँचेर धेरैको मन जितिसकेका छन् । त्यत्तिमात्र होइन ब्ल्याकहर्स सुजको विज्ञापनमा पनि ‘कुल्फीडान्स’ नाँचेर विज्ञापन खेलेका छन् ।
झक्कड थापा र ‘कुल्फीवाला’ मनकुमार राईले आफ्नो पनबाटनै केहि गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण दिएका छन् । आफूमा भएको सिर्जनशीलता निर्धक्कसँग प्रस्तुती गरियो भने मजाक उडाउने समाजलेनै पछि सम्मान गर्छ भन्ने यथार्थतालाई पनि प्रमाणित गरेका छन् । आफूले जानेको कुरा निर्धक्कसँग सडकमा होस या कुनै रियालीटि शोमा जहाँ देखाए पनि आफ्नोपनलाई देखायो भने कुनै दिन अवश्य सफल भइन्छ भन्ने उदहरण थापा र राईले दिएका छन् । थापा र राईले अबका दिनमा कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्न नपरोस । आउने दिनमा सफलताको शिखर चुमिरहोस शुभकामना ।
Published On: २३ भाद्र २०७५, शनिबार 1581पटक हेरिएको